ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇
ဖတ်လို ကိုရီးယား ကိုလံဘီယာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ချီတွန်ဂါ ဂရင်းလန်း ဂရိ ဂါ ဂျပန် ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ စင်ဟာလာ စပိန် စရာနန်တွန်ဂို စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် ဆက်ဆွာနာ ဆာမိုအာ ဆီလိုဇီ ဆေးရှဲ ခရီအိုးလ် ဆွာဟီလီ ဆွီဒင် တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တူရကီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နော်ဝေ ပါရှန်း ပိုလန် ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ပြင်သစ် ဖင်လန် ဗီယက်နမ် ဘရာဇီး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘိုင်ကိုးလ် ဘူလ်ဂေးရီးယား မာလဂက်စီ မာလာယာလမ် မူအာရေး မြန်မာ ယူကရိန်း ရာရိုတွန်ဂန် ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရုရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ရှိုနာ လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အယ်လ်ဘေးနီးယား အာမေးနီးယား (အနောက်) အာရဗီ အီတလီ အူရ်ဒူ အေးဝေး
ယေရုရှလင်မြို့ရှိ ပြန်လည်တည်ဆောက်သောဝတ်ပြုရာအိမ်တော် ပြီးဆုံးခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်ရှိနေပြီ။ သို့သော် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဘုရားသခင်နှင့် ဂျူးလူမျိုးတို့၏ဆက်ဆံရေးမှာ အလွန်အားနည်းသည့်အခြေအနေတွင် ရှိခဲ့သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များပင် ယိုယွင်းပျက်စီးလာခဲ့ကြသည်။ အဘယ်သူသည် သူတို့၏အခြေအနေမှန်ကို သိစေပြီး ဘုရားသခင်ထံချဉ်းကပ်လာစေရန် ကူညီပေးမည်နည်း။ ယေဟောဝါသည် ထိုလုပ်ငန်းကို ပရောဖက်မာလခိအား ပေးထား၏။
မာလခိမှတစ်ဆင့် အားပါသောရေးဟန်ဖြင့်ရေးသားခဲ့သော ဟေဗြဲကျမ်းစာ၏နောက်ဆုံးစာစောင်တွင် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းခဲ့သည့် ပရောဖက်ပြုချက်များ ပါဝင်သည်။ မာလခိ၏ပရောဖက်ပြုစကားကို အာရုံစိုက်ခြင်းက ဤဆိုးသွမ်းသောအစီအစဉ်စနစ် အဆုံးရောက်မည့်အချိန် ‘ယေဟောဝါ၏ ကြောက်မက်ဖွယ်သောနေ့ရက်ကြီး’ အတွက်ပြင်ဆင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား အထောက်အကူပေးနိုင်သည်။—⁠မာလခိ ၄:⁠၅။
ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် “လူများတို့ . . . ကိုထိမိ၍လဲစေခြင်းငှာပြုကြပြီ”
ယေဟောဝါသည် ဣသရေလလူမျိုးတို့နှင့်ပတ်သက်၍ မိမိ၏ခံစားချက်ကို ဤသို့ဖော်ပြတော်မူ၏– “သင်တို့ကို ငါချစ်လေပြီ။” သို့သော် ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ဘုရားသခင့်နာမတော်ကို မထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြပြီ။ မည်သို့အားဖြင့်နည်း။ ‘ညစ်ညူးသောအစာကို ယဇ်ပလ္လင်သို့ဆောင်ခဲ့ကြခြင်း၊’ “ခြေဆွံ့သောအကောင်နှင့် နာသောအကောင်ကို” ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။—⁠မာလခိ ၁:၂၊ ၆-၈။
ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် “လူများတို့သည် တရားတော်ကိုထိမိ၍လဲစေခြင်းငှာ ပြုကြပြီ။” လူတို့သည် ‘တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တည်ကြည်မှုမရှိကြ။’ အချို့တို့သည် တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးများကို ထိမ်းမြားခဲ့ကြသည်။ အခြားသူတို့သည် “အသက်ပျိုစဉ်အခါ လက်ထပ်သောမယား” အပေါ်တည်ကြည်မှုမရှိဘဲ ပြစ်မှားခဲ့ကြပြီ။—⁠မာလခိ ၂:၈၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၄-၁၆။
၂:၂—⁠ယေဟောဝါသည် အဘယ်နည်းဖြင့် ထင်ရာစိုင်းယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ “မင်္ဂလာကို အမင်္ဂလာဖြစ်စေ” ခဲ့သနည်း။ ဘုရားသခင်သည် ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်များတောင်းဆိုခဲ့သော ကောင်းချီးကို ကျိန်ခြင်းသို့ပြောင်းစေခြင်းဖြင့် မင်္ဂလာကို အမင်္ဂလာဖြစ်စေခဲ့သည်။
၂:၃—⁠ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့၏မျက်နှာပေါ် “တိရစ္ဆာန်ချေး . . . ကြဲမည်” ဟူသည်မှာ အဘယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိခဲ့သနည်း။ ပညတ်တရားအရ ယဇ်ပူဇော်သောတိရစ္ဆာန်၏ချေးကို တပ်ပြင်သို့ယူသွား၍ မီးရှို့ရ၏။ (ဝတ်ပြုရာ ၁၆:၂၇) ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့၏မျက်နှာပေါ် တိရစ္ဆာန်ချေးကြဲမည်ဟုဆိုသည်မှာ ပူဇော်သောယဇ်များကို ယေဟောဝါငြင်းပယ်ပြီး ယင်းတို့ကိုပူဇော်သူတို့ကို ကိုယ်တော်စက်ဆုပ်ရွံရှာသည်ဟူသောအဓိပ္ပာယ်ပင်ဖြစ်သည်။
၂:၁၃—⁠ယေဟောဝါ၏ယဇ်ပလ္လင်သည် မည်သူတို့၏မျက်ရည်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ခဲ့သနည်း။ ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်၏သန့်ရှင်းရာဌာနသို့လာပြီး ယေဟောဝါရှေ့မှောက် မိမိတို့၏နှလုံးကိုဖွင့်ဟခဲ့ကြသော ဇနီးသည်များ၏မျက်ရည်များဖြစ်သည်။ အဘယ်အရာက သူတို့ကို ဝမ်းနည်းစေခဲ့သနည်း။ သူတို့၏ဂျူးလင်ယောက်ျားများသည် သူတို့ကို မတရားသဖြင့် ကွာရှင်းပြီး စွန့်ထားခဲ့ကြသည်၊ သာ၍နုပျိုသော တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးများကို လက်ထပ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
၁:၁၀။ တံခါးများပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ယဇ်ပလ္လင်မီးထွန်းညှိခြင်းကဲ့သို့သော လွယ်ကူသည့်လုပ်ငန်းများအတွက်ပင် အခကြေးငွေတောင်းကြသော လောဘကြီးသည့်ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ ပူဇော်ရာယဇ်များကို ယေဟောဝါမနှစ်သက်ခဲ့ပါ။ ခရစ်ယာန်ဓမ္မအမှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည့်အရာအပါအဝင် ဝတ်ပြုရေးနှင့်ဆိုင်သောလုပ်ရပ်များသည် ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်နှင့် အိမ်နီးနားချင်းတို့အပေါ် ကိုယ်ကျိုးမငဲ့သောမေတ္တာ၏လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ဖြစ်ရန် မည်မျှအရေးကြီးသည်တကား!—⁠မဿဲ ၂၂:၃၇-၃၉; ၂ ကောရိန္သု ၁၁:၇။
၁:၁၄; ၂:၁၇။ ယေဟောဝါသည် အရေခြုံဟန်ဆောင်မှုကို သည်းခံခွင့်လွှတ်မည်မဟုတ်။
၂:၇-၉။ အသင်းတော်တွင် သွန်သင်ခြင်းတာဝန်ပေးအပ်ခံရသူတို့သည် မိမိတို့သွန်သင်သည့်အရာသည် ဘုရားသခင့်နှုတ်မြွက်စကားတော် သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ‘တည်ကြည်သော ဘဏ္ဍာစိုး’ ၏ကျမ်းစာအခြေပြုစာပေများနှင့်ညီညွတ်ကြောင်း သေချာစေသင့်သည်။—⁠လုကာ ၁၂:၄၂၊ ကဘ; ယာကုပ် ၃:၁၁။
၂:၁၀၊ ၁၁။ ယေဟောဝါသည် မိမိအားဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူတို့ “သခင်၌သာ” ထိမ်းမြားရန်ဟူသော အကြံပေးချက်ကို အလေးအနက်ထားရန် မျှော်လင့်တော်မူ၏။—⁠၁ ကောရိန္သု ၇:၃၉၊ ကဘ။
၂:၁၅၊ ၁၆။ စစ်မှန်သောဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူများသည် အသက်ပျိုစဉ်ကာလ ပေါင်းဖော်သောမယားနှင့်ပြုခဲ့သည့် အိမ်ထောင်မင်္ဂလာပဋိညာဉ်ကို လေးစားရန်ဖြစ်သည်။
‘မှန်သောသခင်သည် မိမိဝတ်ပြုရာအိမ်တော်သို့ လာလိမ့်မည်’
‘မှန်သောသခင် [ယေဟောဝါဘုရားသခင်] သည် မိမိဝတ်ပြုရာအိမ်တော်သို့ ပဋိညာဉ်တမန်တော် [ယေရှုခရစ်] နှင့်အတူ ရုတ်တရက်လာလိမ့်မည်။’ ဘုရားသခင်သည် ‘[မိမိ] လူတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ခြင်းငှာ ချဉ်းမည်၊’ အမှားပြုသူမှန်သမျှတစ်ဖက်၌ လျင်မြန်သောသက်သေဖြစ်မည်။ ထို့ပြင် ယေဟောဝါအား ကြောက်ရွံ့သူတို့ကို မှတ်သားထားရန် “သတိရအောက်မေ့ရာစာစောင်” ရှိသည်။—⁠မာလခိ ၃:၁၊ ၃၊ ၅၊ ၁၆၊ ကဘ။
“မီးဖို၌မီးလောင်သကဲ့သို့ လောင်သော” နေ့ရက်ရောက်လာမည်ဖြစ်ပြီး ဆိုးသွမ်းသူအားလုံးကို ဝါးမျိုဖျက်ဆီးပါလိမ့်မည်။ ထိုနေ့ရက်မရောက်မီ “သားတို့နှင့်အဘတို့ကိုလည်းကောင်း၊ အဘတို့နှင့်သားတို့ကိုလည်းကောင်း အသင့်အတင့်ဖြစ်စေ” ရန်ပရောဖက်တစ်ပါး စေလွှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။—⁠မာလခိ ၄:၁၊ ၅၊ ၆။
၃:၁-၃—⁠မည်သည့်အချိန်တွင် “မှန်သောသခင်” နှင့် “ပဋိညာဉ်တမန်တော်” တို့သည် ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်သို့ ရောက်လာခဲ့သနည်း၊ သူတို့ရှေ့တွင် အဘယ်သူစေလွှတ်ခံခဲ့ရသနည်း။ ယေဟောဝါသည် ကိုယ်စားတစ်ဦးအားဖြင့် မိမိဝတ်ပြုရာအိမ်တော်သို့ ကြွလာခဲ့ပြီး အေဒီ ၃၃၊ နိသန်လ ၁၀ ရက်တွင် ယင်းကို သန့်ရှင်းစေခဲ့၏။ ယင်းသည် ယေရှု ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်သို့ဝင်ပြီး ရောင်းဝယ်သောသူတို့ကို နှင်ထုတ်တော်မူသောအခါသမယတွင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ (မာကု ၁၁:၁၅) ယင်းသည် မင်းလောင်းအဖြစ် ယေရှုခန့်အပ်ခံရပြီးနောက် သုံးနှစ်ခွဲအကြာတွင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူ ကောင်းကင်တွင် ဘုရင်အဖြစ် နန်းတင်ခံခဲ့ရပြီးနောက် သုံးနှစ်ခွဲအကြာတွင် ဖြစ်ပုံရသည်၊ ယေရှုသည် ယေဟောဝါနှင့်အတူ ပုံဆောင်ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်သို့လာပြီး ဘုရားသခင့်လူမျိုး သန့်ရှင်းခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိတော်မူခဲ့သည်။ ပထမရာစုတွင် နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်သည် ယေရှုခရစ်ကြွလာခြင်းအတွက် ဂျူးလူမျိုးကို ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် စေလွှတ်ခံခဲ့ရသည်။ မျက်မှောက်ခေတ်တွင် ယေဟောဝါ၏ပုံဆောင်ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်သို့ ကိုယ်တော်ကြွလာခြင်းအတွက် လမ်းပြင်ဆင်ရန် စေတမန်တစ်ဦး ကြို၍စေလွှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၈၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင် ကျမ်းစာကျောင်းသားအုပ်စုတစ်စုသည် စိတ်ရင်းမှန်သောသူတို့အား အခြေခံကျမ်းစာအမှန်တရားများ သင်ပေးရန် ကျမ်းစာပညာရေးလုပ်ငန်းတွင် စတင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
၃:၁၀—⁠“ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ရှိသမျှကို” ယူဆောင်လာခြင်းက ယေဟောဝါထံ ကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှပေးခြင်းကို ပုံဆောင်ပါသလော။ မောရှေပညတ်တရားသည် ယေရှု၏သေခြင်းကို အခြေခံ၍ ပယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပေးခြင်းသည် တောင်းဆိုချက်မဟုတ်တော့ပေ။ သို့တိုင် ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့သည် ပုံဆောင်အဓိပ္ပာယ်ရှိ၏။ (ဧဖက် ၂:၁၅) ကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှပေးခြင်းကို ကိုယ်စားမပြုပါ။ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းယူဆောင်လာခဲ့ရသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့မူ ကိုယ်တော့်ထံ မိမိတို့ကိုယ်ကိုအပ်နှံပြီး ယင်းကို ရေတွင်နှစ်ခြင်းခံခြင်းဖြင့် တင်ပြချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှကို တစ်ကြိမ်တည်း ယေဟောဝါထံပေးဆက်ကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်ရာရှိသမျှသည် ယေဟောဝါနှင့်ဆိုင်တော်မူ၏။ သို့တိုင် ကိုယ်တော့်အမှုတော်တွင် အသုံးပြုရန် ပုံဆောင်ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည့်အရာထဲမှအချို့ကို ရွေးချယ်ခွင့်ပြုတော်မူ၏။ ယင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေခွင့်ပြုသရွေ့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးက အသုံးပြုရန် လှုံ့ဆော်ပေးသရွေ့ဖြစ်သည်။ ယေဟောဝါထံ ကျွန်ုပ်တို့ယူဆောင်လာသောပူဇော်ရာယဇ်များတွင် အချိန်၊ ခွန်အားနှင့် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ဟောပြောခြင်းနှင့် တပည့်ဖြစ်စေခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် ဥစ္စာအင်ခွင်များပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် ခရစ်ယာန်အစည်းအဝေးများ၊ ဖျားနာသူများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုယုံကြည်သူချင်းများထံ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် စစ်မှန်သောဝတ်ပြုရေးအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့လည်း ပါဝင်၏။
၄:၃—⁠ယေဟောဝါအား ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူတို့သည် အဘယ်နည်းဖြင့် “မတရားသောသူတို့ကိုလည်း နင်းကြ” သနည်း။ မြေကြီးပေါ်ရှိ ဘုရားသခင့်လူတို့သည် စာသားအတိုင်း “မတရားသောသူတို့ကိုလည်း နင်းကြ” လိမ့်မည်မဟုတ်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သူတို့အပေါ်ကျရောက်သော ကိုယ်တော့်တရားစီရင်ခြင်းတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြမည်မဟုတ်။ ယင်းအစား ယေဟောဝါ၏မြေကြီးဆိုင်ရာကျေးကျွန်များသည် စာတန့်လောကအဆုံးတိုင်ပြီးနောက် လိုက်လာမည့်အောင်ပွဲတွင် စိတ်နှလုံးအပြည့်ပါဝင်ကြမည်ကို ပုံဆောင်သဘောဖြင့်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။—⁠ဆာလံ ၁၄၅:၂၀; ဗျာ. ၂၀:၁-၃။
၄:၄—⁠ကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်ကြောင့် “မောရှေ၏တရား . . . ကိုအောက်မေ့” သင့်သနည်း။ ထိုပညတ်တရားကို လိုက်လျှောက်ရန် ခရစ်ယာန်များကို မတောင်းဆိုထားပါ၊ သို့တိုင် ယင်းသည် “နောက်ဖြစ်လတ္တံ့သောမင်္ဂလာအကျိုးတို့၏ . . . အရိပ်ကို” ပြ၏။ (ဟေဗြဲ ၁၀:၁) သို့ဖြစ်၍ မောရှေပညတ်တရားကို အာရုံစိုက်ခြင်းက ယင်းတွင်ရေးသားထားသည့်အရာများ မည်သို့ပြည့်စုံခဲ့သည်တို့ကို သိမြင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အားအထောက်အကူပေးနိုင်သည်။ (လုကာ ၂၄:၄၄၊ ၄၅) ထို့ပြင် ပညတ်တရားတွင် “ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောအရာတို့၏ပုံများ” ပါဝင်၏။ ခရစ်ယာန်သွန်သင်ခြင်းနှင့် အမူအကျင့်ကို နားလည်ဖို့ဆိုလျှင် ယင်းကိုလေ့လာခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်၏။—⁠ဟေဗြဲ ၉:၂၃။
၄:၅၊ ၆—⁠“ပရောဖက်ဧလိယ” သည် မည်သူ့ကို ပုံဆောင်သနည်း။ “ဧလိယ” သည် လူတို့၏နှလုံးကို ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်သော ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်ဟောထား၏။ အေဒီ ပထမရာစုတွင် ယေရှုခရစ်က နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်ကို “ဧလိယ” အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။ (မဿဲ ၁၁:၁၂-၁၄; မာကု ၉:၁၁-၁၃) သူနှင့်တူသော မျက်မှောက်ခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်သည် ‘ယေဟောဝါ၏ ကြောက်မက်ဖွယ်သောနေ့ရက်ကြီး မရောက်မီ’ စေလွှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ယနေ့အချိန်တွင် ဧလိယသည် ‘တည်ကြည်ပြီး သတိပညာရှိသောကျွန်’ ကိုပုံဆောင်ပါသည်။ (မဿဲ ၂၄:၄၅) ဤဝိညာဉ်တော်ဖွားခရစ်ယာန်အတန်းအစားသည် လူတို့ကို ဘုရားသခင် နှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်တည်ထောင်ကြရန် လုံ့လဝီရိယရှိစွာကူညီပေးကြသည်။
၃:၁၀။ ယေဟောဝါအား ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကိုပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ကိုယ်တော့်ကောင်းချီးကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ပိတ်ပင်ထားရာရောက်သည်။
၃:၁၄၊ ၁၅။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏မကောင်းသောပုံသက်သေကြောင့် ဂျူးလူမျိုးသည် ဘုရားသခင့်အမှုတော်ထမ်းဆောင်ခြင်းကို အရေးမကြီးသောအရာအဖြစ် ရှုမြင်လာခဲ့ကြသည်။ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်တွင် တာဝန်ရထားသူတို့သည် ပုံသက်သေကောင်းသူများဖြစ်သင့်သည်။—⁠၁ ပေတရု ၅:၁-၃။
၃:၁၆။ ယေဟောဝါကို ကြောက်ရွံ့ပြီး ကိုယ်တော့်အပေါ် တည်ကြည်မှုရှိသူတို့၏ မှတ်တမ်းကို ကိုယ်တော်သိမ်းထားတော်မူ၏။ ကိုယ်တော်သည် သူတို့ကို အောက်မေ့တော်မူပြီး စာတန်၏ဆိုးသွမ်းသောလောကအဆုံးစီရင်ချိန်တွင် သူတို့ကို ကာကွယ်တော်မူလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ကြည်မှုကို စောင့်ထိန်းမည်ဟူသော ကျွန်ုပ်တို့၏သန္နိဋ္ဌာန်ကို ဘယ်တော့မျှအားမနည်းစေကြစို့နှင့်။—⁠ယောဘ ၂၇:⁠၅။
၄:⁠၁။ ယေဟောဝါစာရင်းရှင်းသောနေ့တွင် “အရင်း” ရော “အဖျား” ပါတူညီသောရလဒ်တွေ့ကြုံရမည်—⁠ငယ်ရွယ်သောကလေးများလည်း မိမိတို့မိဘများကဲ့သို့ပင် ထပ်တူတရားစီရင်ခြင်းခံရမည်။ မိမိတို့၏ကလေးငယ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မိဘတို့၌တာဝန်ရှိသည်! ခရစ်ယာန်ဖခင်နှင့် မိခင်တို့သည် ဘုရားသခင့်မျက်နှာသာရရန် ကြိုးစားအားထုတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်တော်ရှေ့ မိမိတို့၏ကောင်းသောအနေအထားကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။—⁠၁ ကောရိန္သု ၇:၁၄။
‘ယေဟောဝါ၏ ကြောက်မက်ဖွယ်သောနေ့ရက်ကြီး’ တွင် အဘယ်သူ ကယ်တင်ခံရမည်နည်း။ (မာလခိ ၄:၅) “ငါ၏နာမတော်ကို ကြောက်ရွံ့သောသင်တို့၌ကား တရားတော်နေမင်းသည် အနာပျောက်စေသောအတောင်တို့နှင့် ပေါ်ထွန်းတော်မူမည်။ သင်တို့သည် ထွက်သွား၍ တင်းကုပ်၌နွားသငယ်ကဲ့သို့ ခုန်ကြလိမ့်မည်” ဟုယေဟောဝါမိန့်တော်မူ၏။—⁠မာလခိ ၄:⁠၂။
ဘုရားသခင့်နာမတော်ကိုကြောက်ရွံ့ရိုသေသူတို့အပေါ် “တရားတော်နေမင်း” ဖြစ်သူယေရှုခရစ်သည် ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီး ယေဟောဝါ၏မျက်နှာသာတော် ရရှိကြသည်။ (ယောဟန် ၈:၁၂) ယနေ့ သူတို့အတွက် “အနာပျောက်စေသောအတောင်တို့” ဖြစ်သော ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းရှိနေပြီး ဘုရားသခင့်ကမ္ဘာသစ်တွင် ကာယ၊ စိတ်ဓာတ်နှင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုတို့ လုံးဝကုသခြင်းခံရကြမည်။ (ဗျာ. ၂၂:၁၊ ၂) သူတို့သည် ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစွာဖြင့် “တင်းကုပ်၌နွားသငယ်ကဲ့သို့” ပြုမူကြမည်။ ထိုကဲ့သို့သောကောင်းချီးများက စောင့်ကြိုနေသည်ဖြစ်၍ ဘုရင်ရှောလမုန်၏ ဤတိုက်တွန်းစကားကို အာရုံစိုက်ကြစို့– “ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်လော့။ ဤရွေ့ကား လူနှင့်ဆိုင်သော အမှုအရာအလုံးစုံတို့ကို ချုပ်ခြာသတည်း။”—⁠ဒေ. ၁၂:၁၃။
[စာမျက်နှာ ၂၆ ပါ ရုပ်ပုံ]
ပရောဖက်မာလခိ၊ ဝတ်ပြုရေးတွင် ထက်သန်ကိုင်းရှိုင်းခဲ့သော ဘုရားသခင့်ကျေးကျွန်တစ်ဦး
[စာမျက်နှာ ၂၉ ပါ ရုပ်ပုံ]
ယေဟောဝါ၏ကျေးကျွန်များသည် အိမ်ထောင်မင်္ဂလာပဋိညာဉ်ကို လေးစားကြ
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ မာလခိကျမ်းမှ ပေါ်လွင်ချက်များ
က၀၇ ၁၂/၁၅ စာ. ၂၆-၂၉
“ကြင်နာသနား” ခြင်း ရှိကြလော့
မဟာဗာဗုလုန်အားလပ်ရက်ကို ခရစ်ယာန် အားလပ်ရက်အဖြစ် ကျင်းပနိုင်သလော
ဘုရားသခင့်အမှု ထမ်းဆောင်ရန် သင့်ကို သွန်သင်ပေးသူရှိသလော
သင်သည် ယေဟောဝါ၏နေ့အတွက် အသင့်ရှိပါသလော
‘မြဲမြံစွာရပ်၍ ယေဟောဝါ၏ ကယ်တင်တော်မူခြင်းကို ကြည့်ရှုလော့’
သင့်တစ်ဖက်၌လုပ်သော မည်သည့်လက်နက်မျှ အထမမြောက်ရ
၂၀၀၇ ကင်းမျှော်စင်အတွက် အကြောင်းအရာမာတိကာ
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇
ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇